कोरोना संक्रमणका कारण एकै दिन १३ को मृत्यु | रक्त न्युज
कोरोना संक्रमणका कारण एकै दिन १३ को मृत्यु
कोरोना संक्रमणका कारण सोमबार एकै दिन १३ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो संख्या ५ महिनायताकै उच्च हो । आइतबार कोरोनाका कारण एक जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो ।
सोमबार संक्रमण दरसमेत बढेको छ । आइतबार ३०३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा भोलिपल्ट यो संख्या ५५९ पुगेको हो । जसमा ६३ जना एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट ‘पोजिटिभ’ देखिएका छन् । ५ हजार १०५ जनाको परीक्षण गरिएकामा १०.९५ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । आइतबार संक्रमण दर ९.७ प्रतिशत थियो । अस्पतालका आइसोलेसन र सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) का शय्या पुनः संक्रमित बिरामीले भरिन थालेका छन् । देशभरका अस्पतालहरूमा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचाररत संक्रमितको संख्या १०७ पुगेको छ । जसमध्ये ६३.५५ प्रतिशत वाग्मती र ३२.७१ प्रतिशत संक्रमित लुिम्बनी प्रदेशका छन् ।
१८ वर्ष मुनिकाहरूमा सोमबार संक्रमण दर ६.८५ प्रतिशत देखिएको छ । कोरोनाको चपेटामा बिस्तारै बालबालिका र युवा वर्ग पर्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘बालबालिका र युवामा संक्रमण र रोगको कडापन बढ्दो देखिनु चिन्ताको विषय हो ।’
केही दिनयता त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकामा एक वर्ष मुनिका शिशु, बालबालिका र युवाको संख्या उल्लेख्य रहेको अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले बताए । ‘एक साताअघिसम्म ३ जना संक्रमित भर्ना थिए । हाल २२ जना भर्ना छन् । जसमध्ये ३ जना आईसीयूमा छन्,’ डा. दासले भने, ‘पहिले युवाहरू संक्रमित भए पनि अस्पताल भर्ना हुने धेरै कम थिए । यस पटक युवाहरूलाई पनि अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।’
सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा २७ जना संक्रमितको उपचार भइरहेकामा १२ जना आईसीयू र १० जना हाई–केयर वार्डमा भर्ना छन् ।
कोरोनाको पहिलो लहरको दाँजोमा यस पटक जटिल अवस्थाका बिरामीहरूमा युवा र बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य पाइएको औंल्याउँदै सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. रोशनकुमार झाले भने, ‘अहिले धेरैमा निमोनिया देखिएको छ, जसमा बच्चाहरूसमेत छन् । बिरामीहरूलाई अक्सिजनको आवश्यकतासमेत पहिलेको दाँजोमा बढी परिरहेको देखिन्छ ।’
कोरोनाको दोस्रो लहर आउने संकेतका पछाडि भाइरसको नयाँ स्ट्रेन र डबल म्युटेन्ट भाइरस जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा डबल म्युटेन्ट भाइरस पुष्टि भइसकेको छ । नेपालमा पनि केही व्यक्तिमा कोरोनाको बेलायती भेरिएन्ट देखिएको छ । हाल पुष्टि भएको भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ४ देखि ६ गुणासम्म तीव्र गतिले विस्तार हुने विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित भएको डा. झा बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ भेरिएन्टले गर्दा लक्षणसहितको संक्रमण बढ्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय संक्रमितहरू ढिलो र जटिल अवस्था भएपछि मात्र अस्पताल आउने गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे । यसअघि शंका लाग्नेबित्तिकै उपचार गराउँदा समयमै रोगको पहिचान भई संक्रमण जटिलतातर्फ जाने सम्भावना कम देखिएको उनले स्मरण गरे । उनले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र लक्षण देखिनेबित्तिकै उपचार गराउन सुझावसमेत दिए ।
अघिल्लो लेखमाभारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दा नेपालमा जोखिम
अर्को लेखमाक्युवाली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता नीति